Ikanam Ime ụlọ Lighting Manufacturers & Suppliers | LEDIA ọkụ
Onye na-eme ya nke ọma / ODM - Onye na-emepụta ọkụ
Ulo > Ngwaahịa > Ikanam Ime ụlọ
Duru ime ụlọ Ekpuchila ọkụ dị elu, na-eduzi ọkụ, na-eduzi ọkụ, na-eduzi egwu dị egwu, na-eduga Lọdụ. Ntinye aka dị mma nke na-eme ka ọ dị mma maka iji na mpaghara azụmahịa na ụlọ ọrụ, gụnyere ebe a na-ere ahịa, ebe a na-adọba ụgbọala, na-adọba ụgbọala na-ere ngwa ngwa na mgbasawanye ngwa ngwa Afọ iri. Na mmepe na-aga n'ihu nke akụ na ụba nke akụ na ụba, ndị mmadụ na-amatakwu banyere ịchekwa ume, na arụmọrụ na nzọpụta nke ndị na-azụ ahịa.
Ìhè nke na-eduzi ya maka ọkụ na-enwu site na ọkụ ndị dị na Groa nwere ụdị dịgasị iche iche, nke nwere ike iru mkpa dị iche iche nke ndị na-azụ ahịa. Ọzọkwa, ọkụ anyị duuru anyị na-eme ka uru nchekwa nke ike dị, nchebe gburugburu, nchebe dị mma, ezigbo mma na agba.